Alahady 19/07/2015 : Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
“Andian’ondry eo an-tanan’Andriamanitra isika”
Nandritra ity volana ity dia naheno mikasika ny fanirahana isika: i Jesoa naniraka ny mpianany. Tamin’ny heriny dia nitohy izay fanirahana izay, ary rehefa vita izay fanirahana ny mpianatra izay, dia naniraka azy tsiroaroa i Jesoa (Evanjely tamin’ny heriny). Ary androany, niverina nankeo amin’i Jesoa ny Apôstôly nanao ny tatitra momba ny nataony sy ny zavatra nampianariny.
Tonga teo amin’i Jesoa ireo Apôstôly, dia nentin’i Jesoa ka nataony hoe: “Andeha ianareo mitokana any amin’ny tany mangingina ka mialà sasatra kely.”Nandeha sambo izy ireo ho eny ampita, kanjo ny vahoaka indray no tonga alohany teny. Onena i Jesoa nahita ireo vahoaka ireo satria toy ny ondry tsy misy mpiandry izy ireo. Avy nampianatra azy ireo ny Apôstôly ka nanaraka azy ireo ny vahoaka noho ny hetahetany te ahita an’i Jesoa, nitady hitana an’i Jesoa eo mandrakariva. Eo no ahitantsika fa noana, mangetaheta ny Tenin’Andriamanitra ireo vahoaka ireo. Dia io ilay voalaza ao amin’ny bokin’i Jeremia Mpaminany (ao amin’ny Vakiteny voalohany): nomen’i Jeremia tsiny ireo mpiandry ny vahoaka tamin’izany andro izany: “Hoy ny Tompo Andriamanitr’Israely : “Ny ondriko dia nahahakareo, naronjoronjonareo, tsy niahy azy ianareo.” ” Nisy mpitondra tmin’izany andro izany, tsy nijery afatsy izay hahavoky ny tenany, tsy nijery ny andian’ondry fa ny tenany no nahiany. Tsy nahoany akory izay nanjo ireo vahoaka ireo. Izay no nataon’ireo mpiandry, fa tsy navelan’Andriamanitra amin’izao ireo vahoakany, nampanantena Mpiandry ondry tsara izy,hiahy ny ondriny, avy amin’ny taranak’i Davida ; satria efa tsy nanao ny asa tokony ataony ireo mpianadry ondry ka tsy navelan’Andriamanitra ho irery ny vahoakany. Nanomana Andriamanitra, ary io mpiandry ondry io dia tsy iza fa i Jesoa Kristy. Dia hitantsika fa rehefa tonga i Kristy dia nitady azy, nanaraka azy tamin’izay nalehany rehetra ny vahoaka.
Tsy mora ny fitantanana ny Fiangonana fa mila fahafoizan-tena ny andraikitry ny mpiandry ondry, ka raha tsy mahafoy fotoana, vola … dia tsy afaka anankinana io fintantanana andian’ondry io ; tsy maintsy mivonona amin’izay. Ka raha misy mpitondra Fiangonana tsy manana izay fahafoizana izay, dia misy fiantraikany amin’ny fitantanana Fiangonana izany. Asan’Andriamanitra ny anirahana antsika, ary izay no ambaran’i Jeremia Mpaminany: modely ho antsika i Jesoa Mpiandry ondry tsara. Reraka i Jesoa, reraka ny Apôstôly rehefa avy nanao tatitra tamin’i Jesoa , fa nony hitan’i Jesoa ireo vahoaka tonga marobe dia tsy nahapetraka fotsiny izy.
Ny tatitra nataon’ireo mpianatra no antony hanaovantsika ny “Visite Pastorale”: manao tatitra amin’ny tompon’andraikitry ny diosezy isika, rehefa avy niasa nandritry ny taom-pikatrohana iray (ny asa natao, inona ny nety sy ny tsy nety, ny olana nosedraina, ny vahaolana noraisina …) Manao tatitra eo anatrehan’ny Fiangonana isika amin’izay iraka notanterahintsika tany tahaka ny nataon’ireto mpianatra ireto nanao tatitra tamin’i Jesoa ny amin’ny nataony sy ny nampianariny. Ankoatra izay, manao tatitra amin’Andriamanitra koa isika isan-kalahady (amin’ny fotoana fahanginana ao amp-piangonana) momba ny fiainantsika manokana: “Nanao ahoana ny niainako ny herinandro? Inona no tsapako fa fahasoavana noraisiko nandritry ny herinandro? Inona ny zavatra tsapako fa nahaosa ahy tamin’iny herinandro iny?” Izay no andehanantsika any am-piangonana, ary izay koa ny hevitr’ilay tenin’i Jesoa hoe: “Andeha ianareo mitokana any amin’ny toerana mangingina, ary mialà sasatra. ” Ny atao hoe “Sabata” dia fialan-tsasatra, andro natokana hialana sasatra. Fa ny miala sasatra dia mivavaka : eo amin’Andriamanitra isika no miala sasatra: “Ampiraotiny amin’ny vilo-maitso aho ary entiny amin’ny rano manala sasatra”, hoy ny Salamo. Andian’ondry eo an-tanan’Andriamanitra isika, ka matoky fa Andriamanitra no mitantana antsika.
Mandeha mitokana isika rehefa Alahady, mandeha mihaona amin’Andriamanitra. Fihaonantsika manokana amin’Andriamanitra io: ao ny vavaka iarahana manao, fa ao koa ny vavaka manokana ataotsika ; ary zava-dehibe ao anatin’ny Litorjia ny fotoana fahanginana.